Vehivavy amin'ny fampiofanana momba ny toetrandro: Fampidiran-tsokosoko nosy Pacific | Reef Resilience
Enga anie 21, 2018 | Vaovao
Tamin'ny volana martsa lasa teo, nanangona vehivavy 25 avy tany Papua New Guinea, Palau, nosy Marshall, Pohnpei, Chuuk, Yap, Kosrae, UK, ary Etazonia i The Conservancy momba ny natiora hiresaka momba ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ankizy amin'ny fomba samihafa. Nandritra ny folo taona mahery ny traikefa niasa tamin'ny fanitsiana ny toetr'andro tao amin'io faritra io dia nihevitra ny Dr. Lizzie McLeod fa manana ny vokany izy - ohatra, ny tondra-drano amoron-dranomasina sy ny fikaohon-tany noho ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny tafiotra, ny fifindra-monina nataon'ny olombelona, ​​ny fiovan'ny rotsakorana izay misy fiatraikany amin'ny fiarovana ara-tsakafo sy rano, ary ny fiovan'ny mari-pana amin'ny ranomasina izay mety hampihena ny fanamainana coral. Ny tena nahavoa an'i Dr. McLeod taorian'ny fihainoana ny tantara avy amin'ireo vehivavy manerana ny faritra dia ny fiatraikan'ny toetrandro izay tsy dia resahina matetika - toy ny zazavavy kely miaina herisetra rehefa tsy maintsy mandeha lavitra kokoa izy ireo hahazo rano mandritra ny main-tany, na rehefa tsy afaka ny vehivavy mahandro sy manasa lamba noho ny tsy fahampian'ny rano ka manjary iharan'ny herisetra ao an-tokantrano, na ankizy tsy afaka manatrika sekoly satria tsy ampy ny rano handefasana trano fidiovana sy hanomanana sakafo atoandro.
Tamin'ny alalan'ity fifanakalozam-pianarana ity, nahatakatra ny herin'ny fifanakalozan-kevitra i Dr. McLeod izay ahafahan'ny vehivavy miteny malalaka momba ny ahiahiny sy ny fihetsik'izy ireo ilàna ny adihevitra goavana atrehin'ny fiovan'ny toetr'andro. Izy dia nahazo tsindrim-peo avy amin'ny mpitarika mahagaga izay mampiseho ireo vehivavy mba hampihenana ny mety hisian'ny fiovan'ny toetr'andro sy hanohanana ny fianakaviany sy ny fiarahamoniny.
Notarihan'ny Dr. McLeod sy ireo vehivavy nandray anjara tamin'io fifanakalozam-pianarana io, ny Reef Resilience Network dia te hizara ny tantarany, ny fitarihana ary ny tolo-kevitra ho an'ireo mpanapa-kevitra hanakorontana vaovao sy / na hanatsarana ny politika efa misy izay mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny vehivavy. Nangataka an-dRamatoa Berna Gorong, mpandray anjara avy ao Yap izahay, fanontaniana sasantsasany mikasika ny fifanakalozana fianarana.
Reef Resilience Network (RRN): Vao haingana ianao dia nandray anjara tamin'ny fifanakalozana fianarana tany Palau ho an'ny vehivavy avy any amin'ireo Nosin'i Pasifika mba hizara ny traikefany amin'ny fiantraikan'ny toetr'andro sy ny famahana ny vahaolana vaovao. Afaka mizara vitsivitsy amin'ireo vahaolana natsangana ve ianao?
Ms. Gorong: Vahaolana vitsivitsy izay nozaraina tao amin'ny atrik'asa Palau:
Ny hazo honko novokarina tany amin'ny faritra izay maty na nohazavaina mba hanamafisana ny tondra-drano sy ny fikajiana avy amin'ny fiakaran'ny fiantraikan'ny tafiotra sy ny fiakaran'ny ranomasina;
Mamolavola taro any ambanivohitra tsy dia misy mponina loatra, manosika azy any amin'ny faritra izay atahorana ny fifehezana sy ny fampidinana sira amin'ny alàlan'ny rivodoza na ny rivodoza ambony; ary
manangona palmie nipa ao amin'ny taratra tondraky tondra-drano, noho izany dia azon'ny vehivavy ampiasaina ny ravin-javamaniry nipa ho an'ny tafo ravin-damba efa simba.
RRN: Azonao resahina ve ny maha-zava-dehibe ny vahaolana entin'ny vondrom-piarahamonina mivantana?
Ms. Gorong: Zava-dehibe ny fandraisan'anjaran'ireo vondron'olona mivantana amin'ny vahaolana vahaolana amin'ny olana sy ny fanamby atrehin'izy ireo. Izany dia anisan'ny fiarahamonina marefo sy mampifanaraka. Raha vao fantatrao ianao hoe inona no vahaolana tsara indrindra mety aminao, raha tsy azonao tsara ny antony, dia tsy manorina ny fahafaha-manao sy ny fahaiza-manaon'ireo vondrom-piarahamonina izay mahatonga azy ireo hiova. Ny vondrom-piarahamonin'ny nosy dia efa tafavoaka velona tamin'ny taloha, tamin'ny fandinihana tsy tapaka ny tontolo iainany sy ny fianarana ny fomba tsara indrindra handinihana sy handresena sakana
RRN: Nisy tsy nampoizina tamin'ny fifanakalozana fianarana tany Palau?
Ms. Gorong: Ho ahy, ny fahagagana tamin'ny fifanakalozam-pianarana tany Palau dia naheno ny fomba fijerin'ny vehivavy tandrefana sy ny fampitahana ny zon'ny vehivavy any amin'ny tontolo andrefana sy ny vondrom-piarahamonin'ny nosy. Tena nahatsikaritra ahy izany ary nampirehareha ahy bebe kokoa fa teraka aho ary natsangana tao amin'ny kolontsaina sy fombaniko izay manome hery ahy amin'ny maha-vehivavy manana anjara toerana voafaritra tsara izay manangana ny fianakaviako sy ny fiaraha-monina.
RRN: Inona no torohevitra omenao amin'ny mpitantana an-dranomasina iray izay te-hampiroborobo kokoa ny vehivavy sy ny vondrona marefo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiovan'ny toetr'andro?
Ms. Gorong: Ny torohevitro dia ny fahafahako mihaino amin'ny sofina "right", indrindra raha toa ianao mandray anjara amin'ny vondrona izay tsy avy amin'ny sehatra ara-kolontsainao. Mandritra fotoana maro tsy takatry ny sainam-pahaizana ara-kolotsaina, dia mora ny manavaka zavatra. Ny fihainoana, ny fahatakarana ary ny fitenenana amin'ny teny anglisy ho an'ny olona mifandray amin'ny fomba tsy fantatra amin'ny fiteny tsy miteny Anglisy dia sarotra. Na ny tenako aza izay miteny anglisy ho fiteny faharoa ary mifandray amin'ny teny Anglisy ho an'ny fiainako matihanina ary miaina ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny nosy iray, dia mila fotoana kely aho hahatakarana ny teny anglisy rehefa miresaka amin'ny olona voalohany satria fantatro fa tsy mety ny fahatakarako ara-bakiteny dia tokony hifantoka amin'ny fifanakalozan-kevitra. Izany no tiako holazaina amin'ny fihainoana ny sofina "right". Fantaro ny fisian'ity fomba fijery ara-kolontsaina ity ary tena azo itokiana amin'ny fanontanianao sy ny fiaraha-miasa.
Afaka mamaky bebe kokoa momba ity asa ity ianao misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEto ary vakio ny famintinana ny lahatsoratra vaovao amin'ny fampiakarana ny feon'ny vehivavy hampahafantatra ny politikam-panazavana ny toetr'andro. Ity asa ity dia notohanan'ny Nature Conservancy sy ny Ministeran'ny Federaly Alemanina misahana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny natiora ary ny fiarovana ny nokleary (BMUB) - International Climate Initiative (IKI).